Ubudlelwane: Ukunciphisa umnqweno wesondo | Isiseko soMvuzo
Ikhaya ubudlelwane Ukunciphisa isifiso socansi
Ukunciphisa umnqweno wesini yingxaki yokwenyani kubudlelwane bexesha elide. Kuza njengesiphumo sokuvelisa i-dopamine encinci ngexesha lokudibana ngokwesondo neqabane elifanayo. Kwangelo xesha ingqondo iyalinciphisa inani layo le-dopamine receptors ngokuhamba kwexesha kusenziwa isiphumo somvuzo obangelwa nguloo mntu. I-Dopamine yinkqubo ye-neurochemical eqhuba umnqweno kunye nenkuthazo. Iyachuma kwizinto ezintsha. Emva kokuba 'ii-honeymoon neurochemicals' ziphelile, sinokuziva sincinci okanye singenawo umdla wesondo okanye umnqweno weqabane lethu. Singajolisa ekwakheni ikhondo lomsebenzi okanye ekukhuliseni abantwana endaweni yoko. Oko akuthethi ukuba asiziva sithandana okanye sibophelekile kwiqabane lethu, injalo ukuba umnqweno wesini ungaphantsi kunezo zokuqala, iintsuku eziyintloko zothando.
Olovakalelo lokudikwa lunokuqhuba abanye abantu ukuba bafune amathuba amatsha okutshatana namaqabane azimiseleyo, okwenyani okanye okwenyani. Namhlanje ukuthanda izinto ezingamanyala kwi-intanethi kubangela ubudlelwane obuninzi. Iziphumo zeCoolidge sisizathu sokuba iphonografi, kodwa ngakumbi iphonografi kwi-intanethi, inomtsalane. Ukuhamba rhoqo kwinoveli kunye namaqabane abonakala ngathi anomdla kubonakala ngathi kuyafumaneka kuthi, ngokuswayipha, cofa okanye ucofe. Ngaphandle kweMpembelelo yeCoolidge, ngekhe kubekho i-intanethi ye-intanethi. Ingqondo yomlenze wokuqala ayinakuchaza umahluko phakathi kwamaqabane okwenyani kunye ne-2-dimensional, iinguqulelo zokwenyani ezikwisikrini.
Ukunceda ukuvuselela intlantsi, ukutshintshiselana ngokuziphatha kuyacetyiswa. Ezi ziimpawu ezingacacanga kwingqondo ye-limbic eyanceda ukuthomalalisa imvakalelo yokwahluka okanye ingqumbo. Jonga oku kuluncedo inqaku ngeenkcukacha ezithe kratya. Enye yeencwadi ezilungileyo kwintengiso engagcini ngokuseta i-neuroscience kunye ne-psychology exhasa le nto kodwa ikwanesikhokelo ngamanyathelo okuyinyanga, Umcibisholo onetyhefu ka-Cupid- Ukusuka kwisiqhelo ukuya kwiHarmony kubudlelwane bezesondo, NguMarnia Robinson. Yintoni enokufunyanwa Apha. Jonga oku podcast ukujonga ngokukhawuleza umxholo kunye nombhali.
<< Iziphumo zeCoolidge Isini kunye ne-Porn >>